Akhriso C/raxman C/shakur Oo Diiday In Damaanad Lagu Daayo, Iyadoona Dib loogu Celiyay Xabsiga NISA. – Hornafrik Media Network
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo la horgeeyay Saaka Maxkamadda Gobalka Banaadir ayaa la dhagaystay Dacwad ay ku soo oogtay Xafiiska Xeer Illaaliyaha Qaranka, iyagoona ku eedeeyay inuu Dowladda Siyaasad ahaan u mucaaraday.
Eedda loo haysto C/raxmaan C/shakuur ayaa waxaa Maxkamada ka hor jeediyay Xeer Illaaliyaal, kuwaasoo sheegay inuu Fagaarayaal ku dhaliilay Dowladda Somalia, Waxaase la yaab noqotay markii uu C/raxmaan laftigiisu ka hor sheegay Maxkamadda inuu ku dhiiran yahay inuu Aragti Siyaasadeed ku diidan yahay Dowladda Somalia, taasina hadeey Dambi tahay lagu oogo, Wuxuuna soo daliishaday Qodobo Dastuuri ah oo u fasaxaya inuu Aragtidiisa Siyaasiga ah jeedin karo.
Qareenadda Difaacayay C/raxmaan C/shakuur ayaa iyaguna Dood Kulul ku soo bandhigay halkaasi, kuna dooday in lagu xad gudbay Dastuurka Dalka, lana weeraray Guri uu dagan yahay Masuul aan Dowladda Dagaal hubaysan kala soo horjeedin, Waxayna soo jeediyeen in Maxkamadda la hor keeno Ciddii fulisay Weerarka lagu qaaday Guriga C/raxmaan C/shakuur iyo Ciddii amartay. Iyagoo dalbaday in lagu soo oogo Dacwad sababta ay u weerareen Guriga Siyaasiga.
Dood kadib waxa uu Guddoomiyaha Maxkamadda amray in Damaanad lagu daayo Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, balse waxa uu C/raxmaan laf ahaantiisu ka hor cadeeyay Maxkamadda inuusan diyaar u ahayn in la damiinto, isagoona ku dooday in haddii uu dambi leeyay in lagu qaado, haddii uusan lahayna la cadeeyo Dambiga laga gaystay Gurigiisa cidda leh Masuuliyadeeda. Waxaa sidoo kale la waydiistay Xildhibaano ku sugnaa Goobta inay damiintaan C/raxmaan C/shakuur, kuwaas oo ahaa Saaxibadiis, waxayna goobta ka cadeeyeen inaysan garanayn sabab ay u damiintaan, iyagoo ku dooday in haddii uu Dambi leeyahay ay damiinan karaan, balse ha la cadeeyo waxa lagu haysto.
Markaa kadib waxa uu Guddoomiyaha Maxkamaddu amray in dib la isugu soo laabto Dacwadda mar kale 24 Saac, kadib. Isagoona soo xiray Maxkamaddii. Waxaana loo celiyay Siyaasi C/raxmaan C/shakuur Xarunta Nabadsugidda ee Habar Khadiijo.